I-Biography kaEliya, umprofeti weTestamente elidala
Unqulo & Umoya ITestamente Endala
Ingcaciso emfutshane kaEliya, umprofeti weTestamente elidala
Umlingiswa kaEliya ubonakala kwiimibhalo zobuYuda / zamaKristu kunye neQuran ye-Islam njengomprofeti kunye nomthunywa kaThixo. Udlala indima njengomprofeti kwiMormoni kwiCawa lamaSanta aMaLuku . UEliya ukhonza indima eyahlukileyo kulezo zithethe zonqulo kodwa edlalwa njengomsindisi wamandulo, umlandeleli kumanani amaninzi, njengoJohane uMbhaptizi noYesu Kristu.
Igama liguqulela ngokoqobo ngokuthi "iNkosi yam nguYehova."
Ingaba u-Eliya kunye nabanye abalingiswa beBhayibhile, abanokuqinisekiswa, kodwa i-biography ecacileyo esinayo ivela kwi- Old Testament Christian Bible . I-biography exoxwe ngayo kweli nqaku ithathwa kwiincwadi zeTestamente Endala, ngokukodwa kwiiKumkani 1 kunye nooKumkani 2.
Ngaphandle kokuvela kwidolophana yaseTishbe eGiliyadi (malunga nokuba akukho nto iyaziwa), akukho nto ibhaliweyo malunga nemvelaphi yakhe ngaphambi kokuba uEliya abonakale ngokukhawuleza ukukhuthaza iinkolelo zakwaYuda zendabuko.
U-Eliya uchazwa njengokuba wayephila ngexesha lolawulo luka-Ahabhi uAhabhi, uAhaziya, noYehoram, ngexesha lokuqala kwekhulu le-9 BCE. Kwiimibhalo zeBhayibhile, ukubonakala kwakhe kokuqala kumbeka malunga nokulawula kukaKumkani uAhabhi, unyana kaOmri owasekela ubukumkani basenyakatho eSamariya.
Oku kwakuza ku-Eliya kwindawo ethile malunga ne-864 BCE.
Izinto zikaEliya zazigcinwe kummandla wasenyakatho wakwaSirayeli. Ngamanye amaxesha ubhalwa njengokuba kufuneka abaleke ulaka luka-Ahabhi, ubalekele kwisixeko saseFenike, umzekelo.
IBhayibhile ibonisa oku kulandelayo kuEliya:
KwiiKumkani 1, uEliya ngokukhawuleza ubonakala ngexesha lokulawula kukaAhabhi ukuba ashumayele imbalela eya kuthunyelwa nguThixo ekukhulekeleni uBhali.
Kamva, uEliya uhlangana nabaprofeti bakaBhali ukucacisa ukuba ngubani onyana ophakamileyo; njengoko ibali lihamba, uEliya "uyazuza" xa uYehova ephendula imithandazo yakhe. Ababingeleli bakaBhali baxhelwa ngamaSirayeli.
Ngoko uEliya ubalekela u Yehova ngolaka ngokuthatha uhambo oluya kwiNtaba yaseSinayi, apho uqala ukudikibala, aze avuselelwe ukholo lwakhe nesibindi.
UEliya kamva wamgxeka uKumkani uAhabhi ngenxa yokusetyenziswa kakubi kwemithetho, ephikisa ukuba bonke abantu babalingana phantsi koThixo, kubandakanywa nookumkani, kwaye ukuba nokuziphatha kufanele kube sisiseko sezimiselo zomthetho.
UEliya kamva wabiza ulaka lukaYehova kwindodana ka-Ahabhi xa ecela unqulo lobuhedeni, uBhali.
Njengoko kudibene kwiiKumkani 2, Emva kokuba uEliya anikezele imisebenzi yakhe kuElisha, umlandeli wakhe, uEliya uphukela ezulwini ngeenqwelo zokutsha. Inkolelo ithi uEliya akazange afe kwaye uya kubuya ngaphambi kwesigwebo sokugqibela sikaThixo-inkolelo enkulu yamaKristu emveli. Enyanisweni, iminyaka engama-800 kamva, amanye amaKristu okuqala ayengakholelwa ukuba uEliya wayebuyile ngohlobo lukaYohane uMbhaptizi.
Kubaluleka kweNkcubeko yeNkolo
Kubalulekile ukuqonda ukuba kwixesha elidlulileyo elimelelwa nguEliya, inkolo nganye yesizwe inqula unqulo lwayo, kwaye ingcamango yokuba uThixo ongenamnye wayengekabikho.
Ukubaluleka okubalulekileyo kukaEliya kubangelwa kukuba wayeyindoda yokuqala yeengcamango yokuba kukho omnye uthixo nonkulunkulu omnye. Le ndlela yaba yintloko kwindlela uYehova, uThixo wamaSirayeli, eya kwamkelwa ngayo njengoThixo oyedwa wezo zonke iziko lobuYuda / lobuKristu. Ngokuphawulekayo, uEliya akazange avakalise ukuba uThixo oyinyaniso nguYehova, kuphela ukuba kwakukho uThixo oyedwa oyinyaniso, kwaye wayeza kuzibonakalisa kwabo bavula iintliziyo zabo. Ucatshulwa esithi: "Ukuba uYehova unguThixo, mlandele; kodwa ukuba nguBhahali, mlandele." Kamva, uthi, "Ndiphulaphule, Yehova, ukuba aba bantu bazi ukuba wena, Yehova, unguThixo." U-Eliya, ngoko ke, ebalulekileyo ekuphuculeni imbali ye-monotheism ngokwayo, kunye nokukholelwa ekubeni uluntu lunako kwaye lufanele lube nolwalamano lobuqu kunye noThixo onguNkulunkulu.
Le ngxelo ecacileyo ye-monotheism eyayingumguquko wamandulo ngeli xesha, kwaye enye iya kutshintsha imbali.
Umzekelo kaEliya wabuye waqinisekisa imbono yokuba umthetho ophezulu wokuziphatha kufuneka ube sisiseko somthetho wasemhlabeni. Kwiingxabano zakhe noAhabhi kunye nabaphathi bamahedeni beli xesha, uEliya waphikisana ukuba umthetho kaThixo ophakamileyo kufuneka ube sisiseko sokukhokela ukuziphatha kwabantu kunye nokuba ukuziphatha kufanele kube sisiseko somgaqo-nkqubo osebenzayo. Unqulo ke waba ngumkhuba osekelwe kwisigqibo nangomgaqo kunokuba lube lukhuni kunye nolwazi oluhle. Le ngcamango yemithetho esekelwe kwimigaqo yokuziphatha iyaqhubeka nanamhla.
Kutheni Kutheni Ibali lika-Abela linikeza izifundo ezintle kubantwana abangamaKristu
UBhileham - Umboni wamaPagan noMalic
UYobhi - Uthembekile Ngaphandle Kobuhlungu
Isingeniso kwiNcwadi kaNehemiya
Izifundo zeBhayibhile ezi-10: Musa ukuxoka
Yiyiphi incwadi ebhaliweyo kwi-College admissions?
Hestia, uThixokazi ongumGrike we-Hearth
Iqela lebhola lebhola lebhola leKholeji leNdala kakhulu kunye neNdala kakhulu
Coe College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Indlela Yokuyeka Ikholeji Yakho Yichitha Uyazi Njengawe
I-Stunt kwiBhola - Inkcazo kunye Nenkcazo
Ukuqhagamshelana phakathi ko-Osama bin Laden kunye neJizhad
Intsha yamandulo yaseTshayina yeChou
Ukungathobeli ubuhlanga: Izixhobo zokufundisa ukuShatshazwa kobuhlanga
I-SAT Izikolo zokuBamkelwa kwiiKholeji zaseMexico zaseNtshonalanga zonyaka
Ithenda - Yintoni ixabiso okanye ixabiso leNtali?
Amanzi amnyama athatha iminyaka eyi-12 000 yokuzingela eNew Mexico